I-Saddharma-pundarika - iLotus Sutra
I-Lotus Sutra: Ingqwalaselo
I-Sutra ehloniphekileyo ye-Mahayana Buddhism
Kwizibhalo ezininzi zeMahayana Buddhism , ezimbalwa zifundwa ngokubanzi okanye zihlonishwe ngaphezu kweLotus Sutra. Iimfundiso zayo zihamba ngokubanzi kwizikolo zaseBuddhism eChina, Korea naseJapan. Nangona kunjalo imvelaphi yayo ihlanganiswe imfihlelo.
Igama le-sutra kwisiSanskrit nguMaha Saddharma-pundarika Sutra , okanye "i-Great Sutra yeLotus yoMthetho omangalisayo." Ingumzekelo wokholo kwezinye izikolo zeBuddha ukuba i-sutra iqulethe amagama eBuddha yembali.
Nangona kunjalo, uninzi lwababhali-mlando bakholelwa ukuba i-Sutra ibhaliwe kwikota yokuqala okanye ye-2 CE, mhlawumbi ngababhali abangaphezu kweyodwa. Inguqulelo yenziwa kwiSanskrit ukuya kwisiTshayina ngo-255 CE, kwaye le yile mibhalo yembali yokuqala.
Njengokuba kunjalo nangama-Mahayana sutras amaninzi, itekisi yangaphambili yeLotus Sutra ilahlekile. Iinguqulelo eziliqela zaseTshayina ziinguqu zendala ze-sutra eziseleyo kuthi. Ngokukodwa, inguqulelo yesiTshayina yi-monk Kamarajiva ngowe-406 CE ikholelwa ukuba iyona inokuthembekileyo kwimiyalezo yokuqala.
Ngekhulu le-6 i-China iLotus Sutra yaphakanyiswa njenge-sutra ephezulu yi-monk uZhiyi (538-597; nayo iprogram yesi-Chih-i), umsunguli wesikolo saseTyantai saseMahayana Buddhism, esibizwa ngokuthi iTendai eJapan. Ngokwengxenye ngefuthe leTendai, uLotus waba nguSutra ohloniphekileyo eJapan. Yathintela kakhulu iJapan yaseJapan kwaye yinto yokuzinikela kwesikolo seNichiren .
NgesiBuddha, i-sutra yintshumayelo kaBuddha okanye omnye wabafundi bakhe abaziintloko. AmaBuddhist sutras ngokuqhelekileyo aqala ngamazwi wendabuko athi, "Ndiye ndivile." Oku kugxininisa kwibali likaAnanda , owathi wabuyela yonke intshumayelo yeBuddha yeBhunga likaBuddha lokuqala kwaye kwathiwa waqala ukukhumbuza ngalunye ngale ndlela.
ILotus Sutra iqala, "Ndiye ndava. Ngesinye isikhathi uBuddha wayehlala eRaagaghaha, ehlala kwiNtaba yeGridhrakuta." I-Rajagriha yayisisixeko esakhiweni sosuku luka-Rajgir namhlanje, enyakatho-ntshona yeIndiya, kunye neGridhrakuta, okanye "i-Peak's Peak," isondele. Ngoko, iLotus Sutra iqala ngokuqhagamshela indawo yangempela ehambelana neBuddha yembali.
Nangona kunjalo, kwiimvakalisi ezimbalwa, umfundi uya kushiya ihlabathi elimangalisayo emva. Isimo sivula indawo ngaphandle kwexesha eliqhelekileyo kunye nendawo. UBuddha uhamba kunye nenani elingenakulinganiswayo, iidonki zabantu, abangabantu abangabantu, iintambo, abahlali, ama-laywomen, izidalwa zasezulwini, ama- dragons , i- garudas kunye nabanye abaninzi, kuquka i- bodhisattvas kunye ne- arhats . Kule ndawo enkulu, iihlabathi ezili-elinesibhozo elinesibhozo zikhanyiswa ngokukhanya okuboniswa ngunwele phakathi kweenkibi zikaBuddha.
I-Sutra ihlukaniswe ngeziqendu eziliqela - 28 kwiinguqulelo zeKamarajiva-apho iBuddha okanye ezinye izidalwa zinikela ngeentshumayelo nemifanekiso. Isicatshulwa, inxalenye yeprose kunye nenxalenye yevesi, iqulethe ezinye zeempembelelo ezintle zeencwadi zonqulo zehlabathi.
Kungathatha iminyaka ukufumana yonke imfundiso kwi-text text. Nangona kunjalo, iingqungquthela ezintathu zeenhloko zilawula iLotus Sutra.
Zonke iinqwelo ziNqwelo
Kwiingxelo zokuqala, uBuddha uxela ibandla ukuba imfundiso yakhe yangaphambili yayisesikhashana. Abantu babengakulungele ukufundisa kwakhe okusemgangathweni, wathi, kwaye kwafuneka kuhanjiswe ekukhanyeni ngeendlela ezifanelekileyo. Kodwa iLotus ibonisa ukugqibela, imfundo ephezulu, kwaye iphakamisa yonke imfundiso.
Ngokukodwa, uBuddha uthetha imfundiso ye-triyana, okanye "izithuthi ezintathu" kwiNirvana . Ngokucacileyo, i-triyana ichaza abantu abaqaphela ukukhanya ngokuphulaphula intshumayelo kaBuddha, abantu abaqaphela ukukhanya kwabo ngokwenza umgudu wabo, kunye nomendo we-bodhisattva. Kodwa iLotus Sutra ithi iinqwelo ezintathu zithuthi enye, imoto yeBuddha, apho zonke izidalwa ziba yimiddha.
Zonke izinto ezinokuba yiBuddha
Umxholo ochazwe kwi-Sutra kukuba bonke abantu baya kufumana uBuddha baze bafumane iNirvana.
UBuddha uboniswa kwiLotus Sutra njenge- dharmakaya - ubunye bezinto zonke kunye nezidalwa, ezingabonakaliyo, ngaphandle kokukho okanye ukungabikho, ezingahambisani nexesha kunye nendawo. Ngenxa yokuba i-dharmakaya zonke izidalwa, zonke izidalwa zinokukwazi ukuvusa ukunyaniseka kwazo kunye nokufumana uBuddha.
Ubaluleka bokholo kunye nokuzinikela
UbuBuddha bungafumaneki ngeengqondo kuphela. Eneneni, umboniso weMahayana kukuba ukufundiswa ngokupheleleyo akukwazi ukubonakaliswa ngamagama okanye ukuqondwa ngokuqonda okuqhelekileyo. I-Lotus Sutra igxininisa ukubaluleka kokholo nokuzinikela njengendlela yokwenza ukukhanya. Phakathi kwezinye iingongoma ezibalulekileyo, uxinzelelo okholweni kunye nokuzinikela kwenza uBuddha kufinyeleleke ngakumbi kubantu abanobuchule, abangayichitha ubomi babo kwimimandla ye-monastic.
Isici esahlukileyo seLotus Sutra kukusetyenziswa kwemifanekiso . Imizekeliso iqulethe iindidi ezininzi zesalathisi eziphefumlele ezininzi iindlela zokutolika. Oku kuluhlu nje lwemifanekiso emikhulu:
Indlu yokutsha. Indoda kufuneka ibambe iqela lokudlala abantwana ngaphandle kwendlu evuthayo (Isahluko 3).
UNyana olahlekileyo. Umntu osweleyo, ozikhukhumeza ngokuthe ngcembe ufunda ukuba ucebile ngaphezu kweyomlinganiselo (Isahluko 4).
IiMedical Herbs. Nangona bekhula kwindawo efanayo kwaye bafumana imvula efanayo, izityalo zikhula ngeendlela ezahlukeneyo (Isahluko 5).
Isixeko saseFantom. Indoda ekhokela abantu eluhambeni olulukhuni idibanisa idolophu ehle ukuba ibanike intliziyo ukuba iqhubeke (Isahluko 7).
Umtya kwiJacket. Indoda idonsa ingubo ebhokisini lomhlobo wayo. Nangona kunjalo, umhlobo uhambela entluphekweni engazi ukuba unempahla ebalulekileyo (iSahluko 8).
Igugu kwi-Top-Knot yoKumkani. U kumkani unika izipho ezininzi kodwa ugcina ixabiso lakhe elingenakuthenjwa kakhulu kumntu onobungcali obuqaqambileyo (Isahluko 14).
Ogqwesileyo ugqirha. Abantwana bonyango bafa ngenxa yetyhefu kodwa bengenalo ingqondo yokuthatha iyeza (Isahluko 16).
Uguqulelo lukaBurton Watson lweLotus Sutra (Columbia University Press, 1993) luye lwafumana udumo olukhulu ukususela kwincwadi yaso ngokucacileyo nokufundwa kwayo. Thelekisa ixabiso
Uguqulelo olutsha lweLotus Sutra nguGene Reeves (Ubulumko boBukumkani, 2008) lubuye lufundeke kwaye luye lwadunyiswa ngabahlalutyi.
Xa Bonke Abashiyekileyo NguYesu
Ngaba Uthukuthela Isono?
Ukukhanyiswa kunye neNirvana
Ngubani na i-Dalai Lama?
Iimpawu ze-Ugaritic zibonisa iimpawu ezinokwenzeka kwi-Abraham
Yintoni AmaBuddha Akholelwayo?
Ukuphindukuzalwa Ngaphandle Kwemiphefumlo?
Ukusabela: Ukuba ngumBuddha
Ukuqonda Uhlalutyo olulinganisiweyo kwiKhemistry
Indlela yokubala ukuphambuka okuqhelekileyo
Indlela Yokuzizisa NgeSpanish
Iimpawu zeAngel: I-Ray Light, elayishwe ngu-Archangel Zadkiel
Ubomi obungenakwenzeka ngo-Henry Steel Olcott
I-Top 10 Safe Safe Used Cars Cars
Ukwahlukana phakathi kwe "Quote" kunye ne "Quotation": Liliphi ilizwi elifanelekileyo?
Ukusetyenziswa kwesiNgesi ukuSebenza
Izibonakaliso Ukuba Unokuba Unayo Izinto Ezidlule
Igalari yeeNdlu, iBhakethi yePaint of Tips
Ngaba Ndifanele Ndifumane iSigqeba soLawulo lweCandelo loLawulo?
Sebenzisa iMarker Marker ukuSayina iMifanekiso yakho
IDandelion Magic kunye neNkcubeko
Imvume eSebenzisiwe kwiRhetoric
Iintsikelelo zoPhicotho lwaBonke beCandelo
Amaqhinga angamaqhinga kunye namahlazo angabonakaliyo
Imithandazo yamaKatolika yeZonke iimfuno kunye neenjongo ezikhethekileyo
Ngaba i-Latitude okanye i-Longitude? Funda indlela yokukhumbula ukuhluka
Ukuphononongwa: iPirelli P Zero Nero Yonke Ixesha
Yintoni i-Ho-4 Hole eGoli?
DNA Inkcazo kunye noLwakhiwo
Izizathu ezi-10 eziphezulu zokufunda iNitnem yonke imihla
I-Pennsylvania Academy yezobuGcisa beeNgcaciso
Imizobo Ephefumlelweyo Yomculo Womculo